IYYAA, IYYA DABARSAA || BIYYALAATTIS NU QOCHISIIFACHUU FEDHUU? 06.05.14 | Dhaamsa Ogeettii
Posted: Caamsaa/May 6, 2014
Yaa Oromoo koo, isin harra mandhee Oromiyaa isa: “gadaa.com” jedhamu irratti, waayee ijoollee teenyaa isaan Unibarsiitii Wallaggaa irraa hiriira nagaa, nagaan bayanii warra nagaa hin beeknee fi nagaa hin taaneen reebaman arguun keessan hin oolu. Mucayyoo foolisoota Wayyaneetiin reebamtee, funyaan ishii faa madayee san agartanii jirtu. Mee maaltu isinitti dhagayame? Yaa uummata koo, egaa hamma yoomiitti Habashoota qawween biyya keenya seenan kanaan reebamaa, hidhamaa, waxalamaa, garafamaa, ajjeefamneeyyuu Gaara Suufii faatti waraabessaan nyaatamaa jiraanna? Abboo gayeen gayee dhaa, waltaanee, karaa maraan hidhannee ol haa kaanu! Kunoo, Dhaloonni Qubee hamma harraatti unibarsiitota sagal: Unbarsitii Jimmaa, Unibarsitii Mattuu, Unibarsitii Wallaggaa, Unibarsiitii Amboo, Unibasitii Adaamaa, Unbarsitii Dirree Dhawaa, Unbarsitii Finfinnee, Unibarsitii Haramaayaa fi Unibasitii Bulee Horaa irraa hiriiraaf gayaa’anii jiru. Isaan kaanis akka isaan duukaa-bu’an ni beekama. Dabreeyyuu barattoonni Oromiyaa guutuu, isaan manneen barumsaa Oliyyaalee (“secondary schools“) magaalaawwan: Amboo, Midaa Qanyii, Mandii, Gimbii fi Biiloo Boshee faa irraa hiriiraaf gadi-yaa’anii jiru. Warri hafanis akka fakkeenya hangafoota isaanii faaneffatan ni eegama.
Egaa, warri qawween biyya keenya seenee nagaa nu dhoowwuun nu unkuru kun akka nagaan hin teenya, nagaan rafee hin bulle innumtuu ni beeka, Nagaa booressani nagaan jiraachuun eessumayyuu hin jiru. Leencota madeessanii, qeyee qeerransootaa bubuqqisanii taa’uun yoom jiraree? Kunoo, akka harra miidiyaalee addaddaa irra dhageenyetti loltoonni Wayyaanee barattoota nagaan bayanii mirga ofii fi mirga uummata isaanii dhageessisiifatan, xiyyiitii itti-roobsuun hedduu isaanii galaafateeti jira. Ambo keessaa barattoonni 16, Jimma keessaa 4 ajjeefamanii jiru. Hamma haraatti ijoolleen Oromoo 100 ol-tahan, magaalaawwan garagaraa irraa akka galaafatamani gabbaafamee jira. Ijoolleen teenya, kichuuwwan teenya mootummaa Habashaa kanan dhumuun isaanii daran nu gaddisiisa; ijaa fi qaama keenya guutuu booya. Aarii fi xiiqiitu guggubee nu bobeessa. Bakka jirru maraa waltaanee akka kaanu nu godha! Uummanni Oromoo inni naannoo Amboo waan ijoolleen isaa dhumteef, aaree ka’uun hiriira barattootaa-tti makamuun dirqama Oromummaa isaa bahaa jira! Uummanni Oromoo gaaraa dakaa, naannolee cufa irraa fakkeenya obbolaa isaa kan leencota Amboo fudhachuun, mirgaa fi haqa isaatiif oljechuun yeroon isaa ammuma! Mee waan hundaafuu, walaloon kiyya kun barattoota Oromoo diina uummata Oromootiin madeeffan, reebaman, hidhamanii fi daggala keessatti dhokataniif: raajefannoo, biradhaabannoo, jajjabeessii fi mararfannoo haa tahuufi! Ijoollee teenya xiyyiitii diinatiin nu jalaa harcaateef, walaloon kiyya kun lubbuun isaanii akka jannata seentuuf, Oromoon koo akka barabaraan isaan yaadatuuf, cinaa haa goru! Warraa fi firoota isaanii naaf haa jajjabeessu! Oromoonni alaa-manaa iyyanii iyya akka dabarsaniif haa kakaasu!
________________ // ___________
Oromoon wal malee gargaarsa biraa akka hin qabne yoomiyyuu caalaa ifa ta’uu qaba | FDG: Oromoon yoo har’a waliif hin mirmanne (dirmanne) yoom waliif mirmata (dirmata) laata? 06.05.14